आँखा स्वस्थ राख्न अपनाउनुहोस् यस्ता उपाय
२०७७ मङ्सिर ४ बिहीबार ०७:०४:००
पछिल्लो समय काठमाडौँमा फैलिएको धूलो र धुवाँको कारण श्वासप्रश्वासमा जस्तै आँखामा पनि गम्भीर समस्या देखिन थालेको छ । मानिसहरूले यसमा खासै ध्यान नदिएकाले आँखा पाक्ने देखिआँखाको हेर्ने शक्तिलाई समेत कमजोर पार्दै गएको छ । काठमाडौँका अस्पतालहरूमा आँखाको समस्या भएको भन्दै आउने बिरामीको सङ्ख्या बढ्नुले पनि यो कुराको पुष्टि गर्छ । हुन त अहिले बालबालिका देखि वृद्धसम्मले मोबाइल, ल्यापटप ,कम्प्युटर र टेलिभिजन जस्ता इलेक्ट्रोनिक डिभाइस निरन्तर प्रयोग गर्नाले पनिआँखाको हेर्ने शक्तिमा समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ ।
यसबाट आँखामा पर्ने असर र कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने विषयमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका आँखारोग विशेषज्ञ डाक्टर सगुन जोशीको सुझाव :
आँखा कसरी कमजोर हुन्छ ?
- वातावरण प्रदूषण,धूलो र धुवाँले गर्दा आँखामा सङ्क्रमण हुन्छ । यसका कारण आँखा पाक्ने, सुख्खा हुने , पोल्ने, बिझाउने जस्ता समस्याहरुदेखिन्छन् ।अहिलेकाठमाडौंमा यस्तो समस्या मानिसहरुकोसाझा समस्या जस्तो बनेको छ । प्रदुषणनियन्त्रण, धूलो र धुवाँको समस्यालाई समाधान नगर्ने हो भने भविष्यमा धेरैलाई आँखाको समस्याले सताउँछ।
- बच्चा देखि वृद्धसम्मको दैनिकी मोबाइल, ल्यापटप ,कम्प्युटर र टेलिभिजनसँग रमाएर बित्ने गरेको छ । यस्ता बस्तुसँग धेरै नजिक र धेरैसमयबिताउने हुँदा यसले आँखालाई कमजोर पार्दै जान्छ । कम्प्युटरको माध्यमबाट लगातार काम गर्ने पत्रकार, बैंकर्स, कर्मचारी लगायतमा पनि आँखा पोल्ने, दुख्ने समस्या देखिन थालेको छ ।
- कम्प्युटरबाट भिडियो गेम खेल्ने बच्चाहरुआँखा र टाउको दुख्यो भनिरहेका हुन्छन् । किनकि धेरै नजिक बसेर गेम खेल्दा र हेर्दा आँखाको शक्ति बढी प्रयोग भइरहेको हुन्छ । विद्यार्थीहरुलेगृहकार्यपनि कम्प्युटरबाटनै गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा सानै उमेरमा चस्मा लगाउनेको सङ्ख्या बढेको छ । कम्प्युटरका कारण आँखामा देखिने समस्यालाई कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम पनि भनिन्छ । जंक फ्रुड्स र केमिकलयुक्त खानाको कारणले पनि आँखालाई असर पर्छ । यसले मोतिबिन्दु हुने सम्भावना अधिक हुन्छ ।
- मधुमेह बढेको कारणले पनि आँखामा समस्या देखिन्छ । मधुमेहका कारण आँखाका नसाहरू फुट्छ । मधुमेह बढेमा आँखा र किड्नीमा ठूलो असर गर्छ ।
आँखालाई कसरी सुरक्षित राख्ने ?
- राज्यले प्रदूषण नियन्त्रण, धूलोरधुँवाकोव्यवस्थापन , सामुदायिक स्वास्थ्य र सरसफाइ विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
- धूलो र धुवाँबाट बच्न मुखमा माक्स लगाए जस्तै आँखामा पनि प्रोटेक्टिभ ग्लास लगाउनुपर्छ । बाहिरबाट आएपछि सफा पानीले आँखापखाल्नुपर्छ ।
- आँखामापोहोर पस्यो भने सफा पानीले पखाल्नुपर्छ।यस्तो अवस्थामा आँखा मिच्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । पानीले सफा गर्दा फोहोर गएन भने तत्काल चिकित्सकको सहयोग लिनुपर्छ ।
- आँखाकोदृष्टि काम भयो , आँखा रातो हुने आँखा दुख्यो, पोल्यो र टाउको दुख्यो भने पनि चिकित्सकलाई आँखा देखाउनुपर्छ।नेपालमा टाउको दुख्ने बित्तिकै सिटी स्क्यान, एमआरआईगर्ने चलन छ । तर यसको मुख्य कारण आँखा हुन सक्छ भनेर कसैले सोचेको हुँदैन । आँखाकै कारण टाउको दुख्यो समस्या बढी हुन्छ ।
- कम्प्युटर लगायतका इलेक्ट्रोनिक डिभाइसप्रयोगगर्दा प्रत्येक बिस मिनेटमा बिस सेकेन्ड आँखा बन्द गरेर भित्र घुमाउनुपर्छ । प्रत्येक घण्टामाएक मिनेट आँखालाई आराम दिनुपर्छ । एक मिनेटको समय आँखा घुमाएर टाढा र खुल्ला ठाउँमा हेर्नुपर्छ । कम्प्युटरको स्क्रिन पनि ब्राइट गर्नु हुँदैन ।
- कम्प्युटर चलाउँदा एन्टी रिफ्लेक्टिभ कोड (एआरसी) भन्ने चस्मा पाउँछ त्यो लगाउँदा आँखालाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ । बच्चाहरुलाईयस्तो चस्मा प्रयोग गर्न लगाउनुपर्छ ।
- खानपिनमा विशेष ध्यान दिन सक्यो भने आँखा कमजोर हुने समस्या कम हुन्छ ।
- मधुमेह भएका बिरामीले तुरुन्तै आँखा देखाउनुपर्छ । मधुमेह भएको बिरामीले आँखामाचासो नदिँदा अथवा थाहा नपाउँदा अन्तिम अवस्थामा मात्र आँखा सम्बन्धी चिकित्सकलाई देखाउने गर्छन् । यस्तो अवस्थामा आँखाको नशा फुटिसकेको हुन्छ र आँखाको उपचार गर्न निकै कठिनाइ हुन्छ ।
- सबैभन्दा ठुलो विषय भनेको आँखालाई सङ्क्रमण हुनबाट जोगाउनुपर्छ ।